डि’र्भोसपछि एक्लै रमाइरहेका ६ नेपाली नायिका ! – Khabar Patrika Np
डि’र्भोसपछि एक्लै रमाइरहेका ६ नेपाली नायिका !
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, फाल्गुण २८, २०७७ समय: २२:५०:४१
वैवाहिक सम्बन्धलाई निरन्तर लान नसक्नेहरुको भि’ड नेपाली समाजमा अहिले छ’रपष्ठ भेटिन थालिएको छ । त्यसमा पनि कालाकारहरुको लागी त यो विषय सामान्य भैइसकेको छ । सम्बन्ध वि’च्छेद गर्नु आ-आफ्नै बा’ध्यताहुन सक्छ । यस्तै सम्बन्ध वि’च्छेद गरी एक्लै रमाइरहेका यी नेपाली नायिकाहरु :
मौसमी मल्ल:कुनै बेलाकी चर्चित नायिका मौसमी मल्लले १५ वर्षको कलिलो उमेरमानै धनविक्रम मल्लसँग विवाह गरेकी थिइन् । विवाह भएको नौ वर्ष पछि छु’ट्टिएका यो जोडीको भने पि’डा भने घ’रेलु हिं’सा रहेको थियो । पति धनविक्रमले शारि’रिक तथा मा’नसिक या’ताना दिने भएकाले उनीहरुको सम्बन्ध बि’ग्रिएको हो । मौसमीको एक छोरा छन् ।उनको नाम हो विकी मल्ल ,उनले नेपाली फिल्म समयबाट नेपाली फिल्म क्षेत्रमा डे’ब्यु गरेका थिए । तर फिल्म उनी ज’म्न सकेनन् ।
रिमा विश्वकर्मा :कार्यक्रम प्रस्तोतामा ख्या’ती कमाएकी नायिमा रिमा विश्वकर्मा २०७२ सालमा आफ्रनो प्रेमी रो’र्वट विकसँग विवाह गरेकी थिइन् । तर यी दूईको सम्बन्ध भने दूई वर्षमै टुङगियो । विवाह पश्चात रिमा नेपाल मै ब’स्थिइन् भने रोर्वट युकेमानै बस्थे । उनी अहिले आफ्नी आमासँग बस्दै आइरहेकी छिन् , भने आफ्नो काममा नै व्य’स्त छिन् ।
रञ्जना शर्मा:टेलिसिरियलबाट उदाएकी नेपाली नायिका रञ्जना शर्माको विवाह निर्देशक श्याम भट्टराईसँग २०६३ सालमा भएको थियो । भट्टराईले निर्देशक गरेको फिल्म मौसम , म’र्यादामा मुख्य नायिकाको भुमिकामा खेलेकी थिइन् । विवाह पश्चात रञ्जना एक कार्यक्रमा साहभागी हुन अमेरिकामा गइन् । त्यस प’श्चात उनी यतै रमाइन् र पछि उनीहरुले पनि सम्बन्ध वि’च्छेद गरे । हाल उनी अमेरिकामै छिन् ।
गौरी मल्ल :निकै नै राम्री र चर्चित अभिनेत्रीको नाम कमाएकी गौरी मल्ल नेपाली फिल्म जगतकी आर्दश नारी हुन् । उनी सन्तान नामक नेपाली फिल्मबाट नेपाली फिल्म जगतमा उदाएकी थिइन् । उनको विवाह प्रज्जवल भण्डारीसँग भएको थियो । विवाह पश्चात जापान बस्दै आएकी मल्लको वैवाहिक सम्बन्ध भने राम्रो हुन सकेन र पछि स म्बन्ध वि’च्छेद भयो तर पनि अहिलेसम्म उनले दोस्रो विवाह गरेकी छैनन् । अहिले उनी पनि निरन्तर नेपाली फिल्ममा नै व्य’स्त छिन्र ।
रेखा थापा :नेपाली नायिकाहरुमा छुट्टै पहिचान राख्न सफल नायिका रेखा थापाको विबाह निर्माता छविराज ओझासँग वि .स. २०५८ सालमा भएको थियो । यो जोडीको सम्बन्ध लामो समयसँग टि’क्न सकेन । वि.स. २०६९ सालबाट छ’ट्टिएर बस्न थालेका यिनीहरुले २०७३ सालमा कानुनी रुपमा सम्बन्ध वि’च्छेद गरे । थापा अहिले आफ्नी आमासँग बस्दै आइरहेकी छिन् । भने उनको दोस्रो विवाह गर्ने सोच अहिले नभएको बताउदै आइरहेकी छिन् । अहिले पनि फिल्म क्षेत्रमै सक्रिय थापा फिल्म निर्देशक र निमार्ण मै व्य’स्त छिन् ।
अरुणिमा लम्साल :कुनै बेलाकी चर्चित नायिकमा अरुणिमा लम्सालले आफ्नो विराटनगरमा रहेका प्रेमी अमृत अर्यालसँग २०६२ सालमा विवाह गरेकी थिइन् । विवाह गरे पनि आफ्नो फिल्म क’रियरलाई निरन्तरता दिइरहेकी अरुणिमाको २०६८ सालमा छोरीको जन्म भयो । भने त्यस पश्चात उनीहरुको सम्बन्धमा चि’सो आएको थियो । र पछि २०७२ सालमा स -परिवार अमेरिका गएका थिए । अमेरिका जानु भन्दा अगाडी नै नेपालको सम्पति बाँ’डफाड गरिसकेका अर्याल दम्पतीले २०७४ सालमा का’नुनी रुपमानै सम्बन्ध वि’च्छेद गरे ।